Isikhululo senqwelomoya saseBillund sandisa izixhumi zaso kwiinqwelo moya eziyi-11
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Isikhululo senqwelomoya saseBillund sandisa izixhumi zaso kwiinqwelo moya eziyi-11
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • iindaba • Iindaba zasePoland • Technology • Tourism • uthutho
Februwari 9, 2018
Ukuqala nge-2 kaJulayi, kwisikhululo senqwelomoya sesibini ngobukhulu eDenmark, siya kwandisa izixhobo zayo zokudibanisa iinqwelomoya kwiinqwelo moya eziyi-11, xa iLOT Polish Airlines iqala ukusebenza kwiziko layo laseWarsaw Chopin. Ukusebenza amaxesha ali-12 ngeveki, umphathisi-Star Alliance uya kuyilungisa indlela ngomxube wenqanawa ye-E170 kunye ne-E175.
"Siyazingca ngokwamkela iLOT kuBillund kwaye sonwabile kuba ibonile ukubanakho kwintengiso yeNtshona Denmark," utshilo uKjeld Zacho Jorgensen, u-CEO, kwisikhululo senqwelomoya saseBillund. "Ishedyuli yenqwelomoya inika uqhagamshelo oluhle kwiindawo eziya kuzo ePoland, kuMbindi naseMpuma Yurophu, nakulo lonke ilizwekazi laseAsia naseMntla Melika." I-LOT ijoyina i-airBaltic, i-Air France, i-British Airways, i-Brussels Airlines, i-Finnair, i-Icelandair, i-KLM, i-Lufthansa, i-SAS kunye ne-Airlines zaseTurkey ekunikezeleni ukufikelela kwiziko elikhulu laseYurophu labakhweli bakaBillund.
Ukugcwala okungathanga ngqo ukusuka eNtshona Denmark ukuya eWarsaw kukhule nge-22% kunyaka ophelileyo. "Bangaphezulu kwama-22,000 abantu basePoland abahlala kwindawo esihlala kuyo, kwaye ama-40,000 amaDanes aseNtshona atyelele iPoland kulo nyaka uphelileyo," wongeza uZacho Jorgensen. "Siyazi kananjalo ukuba ibango elinokubakho kuthungelwano lwe-LOT lokuya phambili ngokusebenzisa indawo yalo ukuya kwiindawo ezinje ngeBeijing, iSingapore neNew York zimalunga nama-435,000 abakhweli ngonyaka."
Inkonzo entsha yeLOT kwikomkhulu lasePoland ijoyina isikhululo seenqwelomoya saseDenmark esele ikhona kabini ngeveki kwiChopin, eqhutywa nguWizz Air. Isiphatho esineendleko eziphantsi sisebenza enye yeenkonzo zikaBillund ePoland, kathathu ngeveki ukuya eGdansk, ngelixa iRyanair ibonelela ngeenqwelomoya kabini ngeveki ePoznan. Phambi kwesibhengezo seLOT, intengiso yasePoland kulindeleke ukuba ibe yeyona ntengiso yelizwe i-12th yelizwe, ibonelela ngezihlalo eziphantse zibe ngama-37,000 ngexesha le-S18. Ngenxa yolu lwando imakethi yelizwe ilindeleke ukuba ibe phezulu kwizitulo ezingama-50,000 XNUMX kweli hlobo.